Avy amin'ny boky The cashless teti-dratsy. Ao amin'ny heviny maoderina, ny hevitra nitsangana fividianana cashless-bahoaka tamin'ny 1949.
Ela be talohan'ny vola ny tena taloha zavatra hafa ny vola. Nampiasa Shell toy ny vola any Polinezia. Hafa ohatra ny "vola" dia vato, volom-borona, trondro farango ary na dia biby fiompy.
Na dia tany Ejipta fahiny sy ny Fanjakana Romanina cashless fandoavam-bola ampiasaina, ohatra, amin'ny spannmålsköp. Western Union ny orinasa naorina tany Etazonia tanànan'i New York Rochester in State. Tsy manana ny fakany indray ny 1851 rehefa nantsoina hoe ny Mississippi Pirinty natao tamin'ny Telegraph Company. Western Union no tena niara-niasa tamin'ny naniraka vola sy ny telegrama maneran-tany. Karazana karatra tany am-boalohany dia efa eo amin'ny 1890 tany Eoropa tamin'ny taonjato. 1914 nanomboka tamin'ny Western Union amin'ny cashless fividianana amin'ny carte de crédit izay mety ho ampiasaina ao amin'ny efaha nanaiky izy ireo.
Ny tena karatra Avy amin'ny taonjato faha-20, ny United States solika toy izany navoakan'ny orinasa sy ny trano fandraisam-bahiny rojo. Iray mahatonga ny fitomboan'ny anjara amin'ny fampiasana ireo karatra ireo be taona, rehefa nitombo motoring orinasa solika nanomboka hamoaka karatra. Nanomboka ihany koa ny Sampan-draharahan'ny fivarotana nandritra ny folo taona io mamoaka karazana famantarana famantarana ny mpanjifa izay natakalo ny bola. Na dia ny sampan-draharaha NK fivarotana ampiasaina ao amin'ny am-polo taona mialoha ny tena karatra famantarana varahina. Soeda ny voalohany "carte de crédit" no antsoina hoe NK-karatra raha ny marina izany no nanaovana ny voaisa mässingspollett. Tamin'ny 60 NK ny nanome ny karatra ao amin'ny maoderina hevitry ny US modely.
Orinasa sasany nanomboka tamin'ny fahazazana manolotra karatra bola sy ny debit karatra ny tsara indrindra mpanjifa. Cumbersome ireo no ampiasaina sy mifamatotra tanteraka ny orinasa amin'ny fanontaniana. Toeram-pivarotana sy ny raharaham-barotra dia nanana ny karatra. Manodidina ny 1938 nanomboka hanaiky ny karatra tsirairay. Ny karatra natao tamin'ny 30 taona ny taratasy mba hampihenana ny mety ho Counterfeiting. John Biggins ny Flatbush National Bank of Brooklyn namorona ny carte de crédit voalohany navoakan'ny banky tamin'ny 1946. Ny fandaharana, antsoina hoe ChargeIT mifandray mpanjifa fividianana eo amin'ny banky eo an-toerana sy ny mpandranto.
Ahoana no tena nanomboka izany rehetra izany - fisakafoana hariva Club
Ao amin'ny heviny maoderina, ny hevitra nitsangana cashless-bahoaka fividianana tamin'ny 1949. Nisy lehilahy iray atao hoe Frank McNamara nihinana tao amin'ny trano fisakafoanana ny Calvin Major Grill akaikin'ny Building-panjakana ny Fanjakana izay ny sendikà Hamilton Sary nahazoan-bola Corporation nanana ny anjara fanompoany. Ny namany dia ny namany sy ny mpahay lalàna Alfred Bloomingdale Ralph Schneider. Dia niresaka momba ny olana iray izay nampindrana mpanjifa ny hafa karatra ny mpiara-monina sy ny maro amin'izy ireo, rehefa afaka ny tsy mamerina ny mpanjifa tsy afaka mandoa ny trosa ho McNamara orinasa.
McNamara hita ihany koa fa tsy nomba ny kitapom-batsy mba handoavana ny sakafo. Amin'ny alalan'ny fanoratana ny sonia eo amin'ny raharaham-barotra karatra nomeny ho an'ny trano fisakafoanana ny volavolan-dalàna mety ho lasa taty aoriana. Araka ny fanehoan-kevitra ankapobeny nifandray ireo zavatra roa McNamara nanana ny hevitra ny zavatra ho lasa tena carte de crédit. Tamin'ny 1950 izy no nanorina ny orinasa sy fisakafoana hariva Club miaraka amin'ny mpisolovava Schneider.
Ny orinasa Lasa mpanelanelana eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa dia novidina avy. Tamin'ny voalohany karatra fandoavam-bola voasoratra sampan-draharaha ny anaran'ireo eo amin'ny karatra. Ny karatra dia ampiasaina ny ankamaroan 'ny drummer ho amin'ny fandoavana ny sakafo. Karatra Club sy fisakafoana hariva dia hasaina karatra voalohany, izay midika fa ny zava-drehetra izy ireo nandoa trosa isam-bolana.
Bloomingdale dia ny fe-potoana ho an'ny mpiara-miasa iray ao amin'ny orinasa. Raha tsy izany, dia malaza ny mpandova ny trano fivarotana sy ny Bloomingdale ny förhållade malaza amin'ny sary modely Vicki Morgan. Olona manan-danja iray hafa teo amin'ny fisakafoana hariva tantara Club Matty Simmons. Simmons nandritra ny fotoana dia ny filoha lefitry sy fisakafoana hariva Club fa malaza indrindra toy ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika mpamokatra.
Ny Amerikana dia izao cashless snowball Rolling ary naka lehibe sy ny lehibe isan-taona. Dingana iray tamin'ny fotoana voalohany debit namoaka karatra banky nanomboka tamin'ny 1951 dia namoaka ny Franklin National Bank of Long Island. Tsy ela, sy fisakafoana hariva Club fifaninanana sy ny maro hafa ireo orinasa lehibe nitombo ny carte de crédit olona goavam-be.
American Express sy Wells Fargo
American Express Niorina tamin'ny 1850 tao Buffalo mba hanatanteraka ny mazava namany Sary fanompoana. Taty aoriana dia nitarina tamin'ny vola FITANTERANA SY asa ao amin'ny Travel orinasa. Henry Wells no nanorina ny American Express niaraka tamin'i William Fargo sy John Butterfield. Ireo mpitondra telo natambatra ho iray. Tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-50, nanomboka ny carte de crédit asa amin'ny fifaninanana amin'ny fisakafoana hariva Club. Ny orinasa ihany koa dia nanana ny tentacles ao amin'ny fahitalavitra izao tontolo izao. American Express dia nanana ny foibeny ao amin'ny trano samihafa any New York.
Ny fotoana American Express nisiany mponina ihany koa ankehitriny Wells Fargo ny olona mitovy anarana. Wells Fargo tatỳ aoriana atao hoe iray amin'ireo banky lehibe indrindra manerana izao tontolo izao. American Express sy Wells Fargo ny tantara dia tena mifamatotra fa sarotra ny manavaka. Toy ny American Express karatra nanomboka ny voalohany tamin'ny 1958 araka ny nampidirina koa ny kaonty bola. Ny mpandraharaha kokoa izay efa mampiasa American Express karatra. American Express vao haingana no niara-niasa tamin'ny rojo mpaninjara ny lehibe Walmart izay iray manome ny karatra voaloa vola mialoha Bluebird voaloa vola mialoha Card.
American Express mihevitra ny tenany ho toy izany manokana fa eo amin'ny lafiny lafo indrindra karatra dia tsy fiatrehana mivantana amin'ny barotra. Mpanjifa dia raisina kokoa ny ho tonga mpikambana ao amin'ny fikambanana irery ihany.
Ny fandraisana mpiasa kokoa mampahatsiahy ny Masonic mitoetra mandritra ny alina noho ny raharaham-barotra. Ny orinasa mikarakara ny oddest fividianana sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ny endrika izany dia toa mampahatsiahy ny Rolls Royce-fitsaboana ny mpanjifa. Fa ny karatra tsy tokony tarehy tarehy dia tahaka ny fiara lafo. Kosa izy ireo "antitra lo Trolley amin'ny zezika." Izany no mitranga indraindray ao amin'ny boky. Ny fankahalana ny carte de crédit mahazo mpanoratra ny atidohany mba mifamadika amin'ny lojika ny fihetseham-po miiba ny tselatra.
Arakaraka manokana dikan-ny American Express karatra efa Koa nisy "olo-malaza karatra" dia ampiasain'ny zava-drehetra avy amin'ny Elvis an'i Zlatan. Misy mihitsy aza rappers nanoratra tononkira karatra ho an'ny malalany. Ity boky teo aloha angamba no nanome ny fahatsapana ny maha zava-misy fotsiny. Misy studded teny alahatro ny manohitra karatra sy ny hafa cashless. Fa ny boky ihany koa ny "hatbok" mankany cashless ary raha ny marina (fitenenan-Zlatan) nosoratan'ny mpanoratra adala ny baolina kitra.
Fa lolompo dia tohanan'ny ny zava-misy. Dyngkärran ambony, na izany aza, dia miavaka ny nateraky ny tampoka synapsfyrverkeri. Toy ny ady toy ny ankizy ny sary vetaveta sy ny fanavakavaham-bolonkoditra manjary mora foana manokana noho ny fihetseham-po ny fahatezerana sy ny rikoriko toy ny olana manodidina ny boky ho lasa olom-pehezin'i manokana ny mpanoratra. Nisy tsy miankina amin'ny fotoana rehetra.
Indraindray ara kokoa ny boky amin'ny teny manokana sy miresaka sy afa-po, ary avy eo dia hiverina ho any amin'ny "toe-tsaina rakipahalalana ara-dalàna". Aoka aho no manomana ny mpamaky ho an'ny tena manokana ao amin'ilay boky. Raha Zlatan famakianao ity boky ity, dia manantena aho fa amin'ny alalan'ny ohatra mitarika ho toy ny Super Dude izy ary manaisotra ny vokany ny "rendrarendra" American Express karatra. Ny fanaovana izay tsara indrindra ataony. Scotch ny carte de crédit ny baolina kitra. Daka dia lavitra ny baolina avy tany anaty ala izay tsy misy olona afaka mahita azy. Aiza no dia ho toy izany rehetra bibidia araka ny tokony ho urinate eo amin'ny karatra. Ahoana ny mpanoratra ho tezitra-pihetseham-po io? Vakio ny boky, ary hahita ny antony.
MasterCard sy Visa - fampidirana
MasterCard (nanorina 1966) dia fikambanana fa ny fiaraha-miasa amin'ny banky maromaro alina izay mpikambana noho ny fotsiny
Companies amin'ny heviny ara-dalàna. Misy orinasa voafetra izay mivarotra karatra fahazoan-dalana. MasterCard ny tantara tany am-boalohany misy ifandraisany amin'ny banky roa fikambanana ho an'ny karatra. Interbank sy ny WSBA. Tsy namorona ny carte de crédit tetikasa antsoina hoe Master poana. Master mpiambina anarana MasterCard tatỳ aoriana. Ny fiandohan'ny izany nivoatra ho orinasa maneran-karatra dia fiaraha-miasa eo amin'ny Master fiampangana sy ny Meksikana banky Banco Nacional. Ny tsipiriany ny tantara dia ny ara-dalàna amin'ny ady izay nitsangana Worthern Bank dia tsy navela hiaraka Master poana. MasterCard ny foiben'ny izao tao an-tanànan'i New York Purchase in State.
Ny fandaharana dia mitovy amin'ny fiaraha-miasa ny fikambanana MasterCard. Ny orinasa dia nanana ny raharaham-barotra no tena ahitana ny fikambanan'ny banky. Misy rohy mahery amin'ny Bank of America no voalohany nanomboka banky famoahana Visa nodimbiasany BankAmericard 1958. karatra voalohany BankAmericard afaka ampiasaina ihany any Kalifornia. Tsy voarara hitarika banky manerana sisin-panjakana. Izany skirted izany amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana ny karatra banky hafa. Most karatra
dia kofehy eny amin'ny Bank of America ho tonga ny tsy voatanisa orinasa sy ny mpikambana ao amin'ny National BankAmericard-tompony.
Ao ny andro alohan'ny fampisehoana nahazo ny anarana amin'izao fotoana izao rehefa nomeny avy ny voalohany hoe Teny iditra carte de crédit. Izany dia ny debit karatra izay mifandray amin'ny solosaina avy eo vao mipongatra rafitra ho fanamarinana antsoina hoe Base I sy ny fototra II. Niandraikitra Master rafitra mifanaraka atao hoe INAS sy INET.
Tapaky ny View tany ivelan'ny Etazonia dia namidy tamin'ny 1974, ary lasa fanampiny ny vondrona antsoina hoe IBANCO banky. Ny orinasa dia atao hoe ny National BankAmericard farany hatrany Visa USA. IBANCO anarana farany momba ny Visa International. Ny voalohany mailaka ny orinasa ny carte de crédit tao an-tanànan'i Fresno amin'ny ny fandraisana an-tanana ny Joseph Williams. Dia tonga tapakila tany amin'ny tanàna hafa any Kalifornia. Ny tetikasa simba amin'ny fotoana rehetra ny tsikera na sy ny hosoka. 1970 nanova anarana rehetra ny fampisehoana. Fanatontoloana ny karatra tany am-boalohany dia nanomboka aminay banky nandao ny karatra, ary nanatevin-daharana rafitra na Master poana na BankAmericard izay taty aoriana dia lasa MasterCard sy Visa.
View nahazo tamin'ny 1987 ny fe-potoana mba hikarakara ny mpaninjara manontolo Interlink Network for banky karatra (ny lehibe indrindra karazana tambajotra ity ao amin'ny United States). Ao amin'ny 'nanomboka taona 90 Smart Visa Card Cash izay mety ho feno vola amin'ny alalan'ny ATM. View nanosika ny fampandrosoana avy amin'ny andriamby mivatra ny Chip karatra anisan'izany ny zavatra antsoina hoe Partner Program. Ao Manhattan, ny banky sy Chase Citibank Manhattan ao amin'ny faramparan'ny taona 90 fitsapana karatra izay nahomby tanteraka. Matetika, ny olona nandidy ny karatra indray mandeha monja. Ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa fikarohana Internet Yahoo nanomboka hamorona hividy pejy ao amin'ny Internet. Jereo koa ny nisokatra tena utkonkurerat fiaraha-miasa amin'ny Microsoft fa olona afaka manao ny banky varotra amin'ny solosaina. Asehoy dia ny foibeny ao Fresno in California.
American Express sy fisakafoana hariva Club karatra manome ny tenany avy Visa sy ny MasterCard raha tsy. Ao amin'ny tranga farany, dia voalohany indrindra ny mpikambana izay hamoaka karatra banky. Ny zava-dehibe samy hafa carte de crédit orinasa dia ny hoe misy izany hoe ny manao banky, fa ny hafa kosa tsy manao. Karatra Visa sy ny MasterCard tahirin-kevitra ara-teknika samy hafa fifandraisana Network tena hafa. MasterCard rafitra, atao hoe Banknet, ny VisaNet Visa.
Visa sy ny MasterCard dia toy izany no fehezin'ny mpikambana toy ny karatra banky mpampiasa ireo raha ny marina tanteraka eo an-tànan'ny banky ireo. Ny fifaninanana eo amin'ny Visa sy ny MasterCard dia saika tsy misy mihitsy, satria ny ankamaroan'ny banky izay mpikambana ao amin'ny fikambanana iray dia ihany koa ny mpikambana ao amin'ny hafa.
Discover sy Sears
Discover Financial Services na fohy fotsiny Discover US lehibe iray hafa carte de crédit orinasa. Efa naorina tamin'ny 1985 ny fizarana ny orinasa ara-bola Dean Witter ary lasa anisan'ny Sears.
Discover Lasa mahaleo tena orinasa tamin'ny 2007 Manome ny karatra Card Discover. Ny karatra ara-teknika tambajotra antsoina hoe Discover Network sy Pulse. Ny foibeny ao suburban Chicago. 2008 nividy Discover ny fisakafoana hariva Club ao amin'ny vondrona ara-bola Citigroup.
Sears, kapreola & Co. Niorina tamin'ny 1886 ny Richard C. Alvah Sears sy ny kapreola. Sears lasa rehefa mandeha ny fotoana anisan'izany ny lehibe indrindra-mba US namany Sary orinasa. Sears koa mifandray amin'ny tranobe Sears Tower any Chicago antsoina ankehitriny hoe ny Willis Tower. Ny tranobe izay mandritra ny fotoana kelikely ny trano avo indrindra eran-tany dia nanana ny Sears hatramin'ny 2004.
Ny maso dia afaka mitarika ny niaviany indray ny 1200s. Fa tena mampiasa nesorin'i raha tsy rehefa nanomboka ny taratasim-bola ho ampiasain'ny isan'ny mpanefy volamena tany Angletera. Taratasim-bola efa nisy nandritra ny tantara, dia indraindray toy ny vola ampiasaina. Ohatra iray izany raha ny miaramila ao amin'ny 50s in Hong Kong nampiasa ny taratasim-bola ho toy ny vola fandoavam-bola. Mpivarotra rehetra nanao sonia ny maso amin'ny teny Sinoa isaky ny fividianana. Mety hitranga fa ny miaramila volana maromaro taty aoriana dia nahita maso ny tenany izay efa nananany tao amin'ny zara-taniny.
Carte de crédit sy ny maso miasa banky Zavatra tsy ampy toy izany koa. Ny mpihazona kaonty manoratra seky ny habetsaky ny izay afaka avy eo ny mpandray avotana ihany ny banky. Tantara fanamarinana dia azo notanana (ampitahao amin'ny karatra). Nisy olona momba ny fampianarana ny maso toy ny "snail ny dikan-karatra banky". Ao amin'ny kontantlöshetens mbola kely niresaka betsaka momba ny famahana maso fiaraha-monina momba ny cashless.
Lehilahy iray efa any amin'ny taonjato 60 vurmade ho an'ity maso sy ny fiaraha-monina izay cashless John Diebold. Ny kevitra orinasa maro Diebold Group namorona tambajotra ara-solosaina ny banky ao anatin'ny folo taona io. Ny fomba fisainany Diebold vokany George Mitchell, izay nanana toerana ambony tao amin'ny Federal Reserve (US banky foibe). Niezaka farany lahatra ny Etazonia banky mba mifamadika ny rafitra ordinatera. Tsy nilaza fa ny taratasim-bola dia lafo, izay tena mitovy amin'ny ankehitriny ny hevitra ho an'ny vola.
Izany dia ny olona toy ireny fa misy fiantraikany ny fandaminana ny American banky Association (ABA) ny 1976 ny fanadihadiana ny mety hisian'ny ho avy maso mahamenatra sy cashless fiaraha-monina. Namorona ihany koa ny komity antsoina hoe Komity Hamarino Tsy ampy Society. Ao afovoan'ny izany ABA lohan'ny Dale Reistad automatique. Ny United States dia tsy hoe fotsiny "kontantlöshetens Ray" fa mifanohitra, hijery mandrakariva ny firenena laharana voalohany. Taratasim-bola nisy ihany koa ireo nalefa tany amin'ny orinasa voakasika eo fandoavana ny faktiora tsy tapaka.
Teo am-piandohan'ireo 90 ny fahafito any Soeda fandoavam-bola amin'ny alalan'ny maso. Tamin'ny taona 2000, ny isa dia bitika 0.1 isan-jato. Amin'ny fotoana izao no tapitra Zavatra banky taratasim-bola bebe kokoa. Tsy misy ny soedoà banky sahy mamaly ny ho an'ny taratasim-bola fotsiny. Avy eo, rehefa soedoà tamin'ny farany banky nanao azy nanaraka ny anankiray kosa ny maso sy ny lahatra no voaisy tombo-kase ny halavany. Tahaka ny te hahafanta-javatra dia ny hoe maso hosoka dia heloka bevava manerana an'i Etazonia, fa tsy mba overdraw ny tantara bola.
A kely ny vola teo amin'ny tantaran'ny
Ela be talohan'ny vola ny tena taloha zavatra hafa ny vola. Nampiasa Shell toy ny vola any Polinezia. Hafa ohatra ny "vola" dia vato, volom-borona, trondro farango ary na dia biby fiompy. Ao ny tsy fisian'ny vola madinika tapaka manana ny oddest fandoavam-bola indraindray. , Ohatra, dia nampiasa bara vy toy ny vola any Sparta satria mitoka-monina avy any ivelany.
Atsimo Andrefana vola madinika nanomboka ampiasaina any amin'ny faritra sasany any Azia Minora, tamin'ny 600 talohan 'i jk Near East dia momba izay antsointsika ankehitriny ny Afovoany Atsinanana. Izany no lydiske Croesus Mpanjaka izay in 500 talohan 'i jk Nanomboka nampanefy vola madinika volafotsy sy ny volamena. Izy ihany koa hoe Croesus ary aminy ny tenin'ny olona manan-karena be tokoa izy. Ary nisy ny tsy fahampian'ny metaly sarobidy ampiasaina mba tena varahina. Izany no nitranga, ohatra, tany am-boalohany tany Roma. Nandritra ny Vikings Age dia nafarana ho any Soeda vola madinika be dia be, avy tamin'ny silamo izao tontolo izao sy ny faritr'i Eoropa. Fa ny Vikings ny volafotsy dia sarobidy, dia azo lazaina vola. Noho izany, dia lany andro vola madinika volafotsy sy ny zavatra volafotsy isan-karazany toy ny fandoavam-bola. Taty aoriana teo amin'ny tantara, nisy takelaka varahina lehibe izay nampiharina ny vola.
Ny voalohany dia vola madinika volafotsy Zavatra minted tao Sigtuna manodidina ny taona 1000. Tany am-piandohan'ny 1500s nanomboka hanisa pennies. Nanomboka tamin'ny teo antenatenan'ireo taona 1800s Soeda nanomboka tamin'ny lohany mampiasa vola (satroboninahitra ary avy eo satroboninahitra), izay nizara roa toko ny ho 100 cents ny. Raha iray amin'ireo Soeda nahafoy ny volamena faneva tamin'ny 1931 nanjavona ny tena maha samy hafa ny vola madinika sy ny faktiora. Ny fitsipika volamena natao tamin'ny praktien ny banknotes mety azo takalozana volamena avy amin'ny tahiry volamena. Izany sy ny banknotes amin 'ny ankapobeny dia mifototra amin'ny fampanantenana ny sy ny fahatokiana ao amin'ny fanjakana. Ny fitokisany mikasika ny fanjakana tahaka ny ankehitriny tsy tokony hiantehitra amin'ny. Ny tsy fahaizana ara-bola no tena miely patrana. Fa ratsy finoana vola noho ny andevo any amin'ny unconscionable cashless fiaraha-monina izay tsy misy aingam-panahy toky mihitsy.
Banknote tantara sy ny fampandrosoana dia mifandray akaiky ny fahaiza-pirinty. Am-boalohany izy ireo ny endriky ny vola miditra na ny trosa talohan'ny lasa tena fandoavam-bola. Banknotes tillverkads aloha tao Shina tamin'ny momba izany fotoana izany ho toy ny vola madinika tena nanomboka tonga (600 talohan'i JK). Izay vao niely ny fampiasana ny banknotes toy ny avy any Shina niely tsikelikely ho any Eoropa any Moyen-Âge. Tamin'ny raha ny marina any Soeda, ary ny iray tany amin'ny 1600s voalohany nanome banknotes tsara tany Eoropa. Voalohany, nataon'i Stockholms Banco, dia ny fanjakan'i signboards banky ary farany ny Riksbank eo amin'ny faran'ny ny 1800s. Tany am-piandohan'ity nanery banky hafa noho ny Riksbank fanamarihana manokana. Ary manarakaraka io Soeda, Angletera no pirinty banknotes amin'ny.
Numismatics - mahavariana ny siansa sy ny fialam-boly
Numismatics dia ny fianarana ny rehetra ny vola madinika. Izany koa ny mandritra fiddling miaraka ary mitady famantarana, banknotes sy medaly. Na dia toy ny zazalahy kely, ny mpanoratra dia variana tamin'ny vola madinika matevina katalaogy izay nisy tao amin'ny trano famakiam-boky. Nanangona vola madinika sy ny toy izany dia tsy mikasika ny mahazo zavatra mahafinaritra eo amin'ny taniny mba hankamamy, manova sy hiverina ary farany paosy nijanona kely tao amin'ny vola madinika fampirimana. Izany ihany koa fomba iray mba hianatra momba ny tantara Toy izany koa ho fanangonana hajia dia mety ho fomba iray hianarana momba ny firenen-kafa. Indraindray ny vola madinika ho efa ho ny hany tena nifandray tamin'ny fe-potoana ara-tantara.
Manangona vola madinika dia iray amin'ireo fialam-boly izay misy ny boky sy gazety be. Zavatra numismatikern voalohany tamin'ireo Elia Brenner. Izao no nosoratany tamin'ny faran'ny ny 1600s ny asan 'ny vola madinika, izay anaram-boninahitra amin'ny teny soedoa tsara ho zavatra toy ny "Coin rakibolana ny Svea sy Göters firenena". Ity fizarana ity ihany koa ao an-toerana miaraka amin'ny tolo-kevitra mba hitsidika Coin Cabinet any Stockholm. Misy ihany koa ny vola madinika mahaliana rakitra ao amin'ny tanàna soedoa hafa. Coin Cabinet no vola ny tranom-bakoka sy ny lehibe indrindra numismatic famoriam-bola tany Soeda. Lasa tranom-bakoka ny samy hafa tamin'ny 1975, ary nifindra roa am-polo taona tatỳ aoriana any Castle Hill.
Ny iray amin'ireo boky ity ny hafatra fototra dia ny hampiseho ny fomba ny izao tontolo izao dia manatona bebe kokoa cashless jadona tanteraka. Arakaraka ny vola mba hanjavona Arakaraka ny very ny mahafinaritra numismatics indrisy ny Mahaliana amin'ny nanapaka tamin'ny antsy
any amin'ny faran'ny tantara izao tontolo izao-tady na dia mamakivaky ny ankamaroan'ny ny tantara avy eo manapaka farany. Ary izany indrisy fotoana hijanona eo anoloan'ny manomboka mpanoratra hanoratra boky momba ny vola madinika sy ny tantara. Ity boky ity dia azo antoka indrindra mikasika ny fiarovana ny vola ankehitriny. Kanefa ity dia lehibe ny fangatahana. Zavatra numismatists hetra sy ny vola madinika! Mampiray! Manampy hiady mba hiaro ny vola Taloha sy Vaovao. Hiady amin'ny fametrahana cashless mpikatroka ny tantara.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 05:43